Cunto: Sababtee maaddooyinka iyo erayada muhiimka ah ayaa muhiim u ah naqshadda webka?
Websaydh aan haysanin wax sax ah, oo aan si fiican loo qorsheyn, ma heli doono gaadiidka, taas oo macnaheedu yahay inaanay ka caawinaynin ururku inuu saameyn ku yeesho internetka.Waxaa sidoo kale lagu dhaafi doonaa matoorada raadinta sababtoo ah la'aanta maadooyin ku habboon. Ereyada iyo waxyaabaha muhiimka ah ayaa kaalin muhiim ah ka qaada hagaajinta darajada boggaaga.
Ivan Konovalov laga bilaabo Semt oo laga wada hadlay sababaha hoos ku qoran, ururku waa inuu ahaadaa mid mowduucyo iyo ereyo muhiim ah
1. Ku wargelinta macaamiishaada iman kara
Waa waajib saaran ganacsi kasta oo macaamiishiisa wax ku baraya alaabtooda ama adeegyadooda. Waxaad awood u yeelan kartaa inaad iibsato alaab iibiyeyaasha oo aad ka filayso in ay si fudud u iibsadaan oo ay u iibsadaan. Xittaa maalmaha hore markii macluumaadka ay adagtahay in ay soo baxaan, shirkaduhu waxay ka shaqeeyeen barista maadooyinka marka hore ka hor intaanay iibin badeecadda.
Sababtaas awgeed waa in aad haysatid waxyaalaha saxda ah ee ku saabsan alaabtaada ee iibsadaha. Intaa waxaa dheer, iibsadayaasha waxay u baahan doonaan macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan warshadaha iyo suuqa oo dhan si ay u sameeyaan go'aano xog ogaal ah. Naqshadda shabakada ee tan oo dhan tixgelineysa waxay hubineysaa in ay soo qabato tirada.
2. Waxaad noqon doontaa meel amar ah ilaa inta macluumaadka uu socdo
Dadku waxay guud ahaan aaminaan website-ka ama xitaa qof ujeedadaas oo muujinaysa in lagu kalsoonaan karo inay ogaadaan waxa ay ka hadlaan. Haddii websaydhkaagu u arko dadka isticmaala internetka inay noqdaan kuwo ku haboon ilaha macluumaadka, dad badan ayaa sii wadi doona. Maxay tahay, dadku waxay yeelan doonaan fikrad guud oo ah in meesha kaliya ee ay heli karaan macluumaadka sheyga wanaagsan waa goobtaada. Adiga oo helaya xaqiiqooyinka dhabta ah ee geedi socodka naqshadda webka, waxaad ku taagan tahay fursad weyn oo aad ugu riixdo suuqgeynta dhinacaaga.
3. Raadinta tartanka moodada ayaa hagaajinaysa
Websit kasta waxaa la abuuray aragtida ama fikradda ah in la helo bogga ugu sareeya ee raadinta mashiinka raadinta. Iyada oo munaasibta saxda ah iyo ereyada muhiimka ah ee ku yaala meelaha saxda ah, website-kaagu wuxuu u taagan yahay fursad weyn oo ay dad badani u arkaan. Sababta ugu weyn ee tani waa sababta oo ah matoorada raadinta waxay ku tusin doonaan bogagga raadinta.
4. Boggagaaga ayaa dib u heli doona daafacyo badan
Waxaad ogtahay dhismaha isku xirnaanta, laakiin waxaad u baahan tahay inaad ogaato sida ay muhiim u tahay boggaaga. Websaytiyada leh macluumaad qiimo sarre leh iyo erayo muhiim ah, bogag badan iyo blogs ayaa doonaya in ay dib ula qabsadaan iyaga. Sidan, boggaan oo kale wuxuu helayaa fara badan oo ka badan kan aan haysanin wax tayo sare leh Source .